Inkqubo yeXeltek |
ISUPERPRO / XPS01 eneSistim yokuCwangciswa kweNkqubo yokuSebenza sisisombululo esipheleleyo sebhodi yePCB kwinkqubo yenkqubo. Iinkqubo ezininzi zeSUPERPRO® / IS0 16-CH ISP, umdlalo wovavanyo, ibhodi yenaliti eyenziwe ngokwezifiso, umphathi ...
Izixhobo ezingama-50861 zeekhompyuter kwaye zihlala zikhula. Izixhobo zenkxaso ngeVcc ukusuka kwi-1.2V ukuya kwi-5V. Inkqubo yokukhawulezisa ukongeza phambili ...
Ukufikelela okuphezulu ...
Kude kube ngoku, Inkxaso yomenzi we-243 IC, izixhobo zeekhompyuter ezingama-36688 kwaye zihlala zikhula. Izixhobo zenkxaso ngeVcc ukusuka kwi-1.2V ukuya kwi-5V. Isantya esikhawulezayo kakhulu kunemodeli yeSUPERPRO / 501S. Yakhelwe ngama-48-pin-driver. Imo yokusingathwa kwePC kunye nokuma ...
izixhobo kwaye iqhubeka ikhula. Ixhasa iintlobo ezingama-87454 zezixhobo ezivela kubavelisi abangama-305 IC (nge-3/15/2013) kwaye iyaqhubeka nokukhula. Ixhasa i-EPROM, i-EPROM ye-Paged, Parallel kunye ne-serial ...